Rev. Mr. Peter Swan - Eucharistic Congress
ပီတာဆွမ်သည်၁၉၅၀ပြည့်နှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၊ရန်ကုန်မြို့တွင်ဂျိုးနှင့်ကော်လင်းဆွမ်တို့မှမွေးဖွားခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့ ပန်စီညွန့်နှင့် လက်ထပ်ထားပြီး သားနှစ်ယောက်ဖြစ်သူ ပီတာဂျူနီယာနှင့် ခရစ္စတိုဖာတို့ရှိသည်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်ဧပြီလတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးအမေရိကန် တပ်မတော်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သူ သည် ၁၉၉၁ခနှစ်သြဂုတ်လတွင်ဖော့မက်ဖာဆန်FortMcPherson ၌အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် မှ အငြိမ်းစားယူ ခဲ့ သည် ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖက်ဒရယ် အစိုးရ က အမေရိကန် စစ်တပ် ထောက်လှမ်း ရေး တပ်ဖွဲ့ ၏ အရပ်ဘက် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်ချက်ချင်း အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်၊ထိုနေရာတွင်သူသည်လာမည့်၂၂နှစ်အတွက်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ထုတ်လုပ်ရေးအရာရှိတစ်ဦးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ဂျုံးစ်ဘိုရိုမြို့တွင်နေထိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၂၀၀၁ခုနှစ်တွင်အတ္တလန်တာမြို့ရှိအတ္တလန်တာဂိုဏ်းချုပ်အတွက် အမြဲတမ်း ဒိုင်ယာကွန်နိတ် သို့ ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသည်။ သူ သည် စိန့် ဖိလစ် ဘန်နီဇီ ဘုရားကျောင်း ၊ ဂျုံးဘိုရို တွင် ဓမ္မဆရာ လက်ထောက် အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင် ပြီး ၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ၊ စစ်မှုထမ်း ရေး အတွက် ဂိုဏ်းချုပ်တာဝန်ကိုလည်းပေးအပ်ခံခဲ့သည် ။ ကိုလံဘတ်စ် (Knights of Columbus)၏ စတုတ္ထ ဒီဂရီ အဖွဲ့ဝင် တစ် ဦး ဖြစ် သော ၊ ဒိကန် ဆွမ် သည် လက်ရှိ တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် တရားမျှတမှု အ တွက် ဗမာ-အမေရိကန်ကက်သလစ်များ ၏ ဒုတိယ ဥက္ကဌ အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသည် ။
Peter Swan was born in Rangoon, Burma in April 1950 to Joe and Colleen Swan. He is married to the former Pansy Nyunt of Tatmye-Rangoon, Burma, and they have two sons, Peter Jr. and Christopher.
Swan migrated to the United States in April of 1971 and joined the United States Army the same year. He retired from the United States Army in August of 1991 at Fort McPherson, Atlanta, and was immediately employed by the United States federal government asacivilian member of the U.S. Army Intelligence Corps, where he served for the next 22 years asageospatial information services and production officer, until his retirement in March of 2013.
A resident of Jonesboro, he was ordained to the permanent diaconate for the Archdiocese of Atlanta in 2001 by Archbishop John F. Donoghue. He serves as pastoral assistant at St. Philip Benizi Church, Jonesboro, and is also assigned to the Archdiocese for the Military Services, USA.
A Fourth Degree Member of the Knights of Columbus, Deacon Swan is the former president of the National Conference of Burmese-American Catholics and served asanational advisor on Burmese Catholic ministry to the United States Conference of Catholic Bishops (USCCB). He currently serves as the vice-chair of the Burmese-American Catholics for Peace and Justice.